Sheekada la yidhaa CID aa Looga Yeedhay?!!! | Hangool News
Sheekada la yidhaa CID aa Looga Yeedhay?!!!
November 30, 2019 - Written by Hangool
Hangoolnews:- Jooji Harawsiga iyo baqo-maalka!!! Aniga oo Cabdo ahi ba CID da Waan Kaaga Yeedhi Karaa!!!
Wariye, Tifatire, A/qadir Coday, Muxuu Ku Xidhan Yahay?!!
Sida aan u fahnasanahay Police ku marka ay nabadgalyo noqoto wuxu la shaqeeyaa Xukuumadda, gaar ahaan Arrimaha gudaha; marka se ay caddaalad noqoto iyo danbi baadhis waa dhex-dhexaad, oo wuxu la shaqeeyaa Garsoorka; cidna uguma amar qaato danbi baadhista iyo natiijadeeda ; waxay baadhi karaan qof shicib ah iyo qof xil haya labadaba; waad maqasheen iyadoo Ra’iisal wasaaraha Israel Police ka iyo xeer-ilaalintu baadhayaan danbiyo lagu soo eedeeyay!!
Beryahan danbe, waxaynu aragnay iyadoo Wasaaradda Warfaafintu warqad u soo qoraysa CID, oo ah laan Police ka ka tirsan oo danbiyada baadha; horta, wuu ku mahadsan yahay Wasiirku in uu warqad qoro, maxaa yeelay, waxaynu ognahay in Qarnkan lagu maamulo afka, si waliba gole ka fuul ah; warqaddaas waxa Police ka lagaga dalbadaa in ay xidhaan TV hebel ama Website hebel, Police kuna sidii bay sameeyaan, wariyaayaasha iyo meheradahooda ba way xidhaan!!
Haddaba, waxa is weydiin leh warqaddaasi ma amarbaa mise waa codsi danbi baadhis?; sida aan u fahansanahay dawladnimada iyo nidaamka aynu qaadanay ee Dimuqraadiyadda Dastuurgia ah (Constitutional Democracy), Wasiir amar ma siin karo Police ka, marka ay noqoto danbi baadhis; laakiin wuxu samayn karaa codsi danbi baadhis iyo eedayn; taasna adiga oo muwaadin caadiya ahiba xaq baad u leedahay in aad codsi u qorato CID da oo aad tidhaahdid qofka sidaas ah ayaa waxaa igu sameeyay ee ha la ii baadho danbi buu iga galaye!!; sida loogu yeedhayo qofka wasiirku soo ashkateeyay ayaa si la mid ah CID u ugu yeedhaysaa qofka adiga oo muwaadin ahiba aad soo ashkateyso; labdaba si isku mid ah ayaa loo waydiinayaa danbi ga lagu soo eedeeyey in ay qabaan; police kuna statement ayay ka qorayaan, iyadoo cidna si gaar ah aanay ugu buuxsanayn ama ugu adeegayn!!
Intaas ka bacdi, Police ku haddii uu ku qanco in uu waxaasi danbi yahay ayuu u gudnibayaa Xeer-ilaalinta, iyaduna waxay u sii gudbinaysaa Maxkamadda; haddii danbigu yahay mid qofku ku xidhmi karona, isla halkaas ayay ku qaban karaan Police ku qofka. Haddii kalena, lama xidhayo ee wuxu noqon karaa kiis aan qofku ku xidhmayn, laakiin dacwaddiisu socon karto, isagoo qofku iska jooga bannaanka, ama Police ku waxay ku qanci karaan in waxaasi aanu danbi ba ahayn, oo markaa qofka farahaa laga qaadayaa!!! Haddii uu yahay arrin qalad yar oo fudud na Police ku digniin bay siin karaan qofka!!
Police ku waa in uu ku tababaran yahay sharciga; waa in uu yaqaan eedda qofka lagu xidhi karo, iyo eedda aanu qofku ku xidhmayn; Xeerka Saxaafaddu wuxu si cad u sheegyaa eedaha loo soo jeediyo suxufiyiinta ee la xidhiidha mihnaddooda in aany ku xidhmayn (not arrestable); iska daa suxufiyiintee, macal meheradahoodii ayaa la xidhaa immika? , haddaba, sharcigan xukuumaddu ka sheekayso, ma wuxu qabtaa uun dadweynaha, miyaanu qaban Xukuumadda; wuxu xeerka Saxaafaddu sheegayaa in kiiska eedda la wadayo iyada oo aan Suxufiga la xidhin?!! Haddaba, miyaanay Xukuumaddu jabin xeerkaas; ma ku kaxaynaa iyada immika qodobkaa, oo maxkamadda ma geynaa xukuumadda lafteeda?!!! Muxuu ku xidhan yahay Wariye, Tifatire C/qadir Codey?!!; miyaanay Police ku kala aqoona (arrestable and un-arrestable cases), sawka sharcigu u kala sheegay, mise waa dookha xisbil xaakimka, ka wax xidhaa?!!!!
Haddaba, Su’aashu waxa weeye, maxay CID u markasta u xidhaysaa meheradda warbaahinta iyo TV kasta ama website kasta oo xukuumaddu ka codsato; halkaas, waxa ka cad in Police kii lumiyeen dhex-dhexaadnimadii, kana mid noqdeen xisbiga talada haya ee Kulmiye (politicized); maxay u dhici waday marka ay waraystaan Tv ga la soo eedeeyay, in ay qaarkood iska sii daayaan, ee mid kasta ay u xidhayaan; markaa ma police ka ayaa u haysta in ay xukuumaddu amarto marka ay danbi baadhis noqoto?!! Nidaamka caynkaas ahi maxaa la yidhaa?!! aan kuu sheegee waa nidaamkii aynu ka soo guurnay ee laga dagaalammay; waa kii Siyad Barre iyo dawladdiisii ama dawladdii Ethiopia intii aanu isbeddelku ka dhicin, ama Djibouti immika tahay!!!
Ugu danbayntii, ma is yeeyeel baa waxani, mise wixii bay naan fahansanayn?!! Mise inteena madaxda ahi waynu isla fahansanahay e , dadwaynaha ayaynu harawsanaynaa?!!!; mise waa intaas oo la isku daray dirkaba?!!!